El Pedraforca, tandindon'i Catalonia | Vaovao momba ny dia
Androany aho dia hanome tsipiriany momba ny fiakarana ho any Pedraforca, iray amin'ireo tendrombohitra malaza sy malaza indrindra amin'ny Catalan Pyrenees. Fitsangatsanganana an-tsitrapo natokana ho an'ireo tia tendrombohitra sy natiora.
Pedraforca dia tendrombohitra iray ao amin'ny faritra Beguedá (faritanin'i Barcelona) ary indrindra ao amin'ny Serra del Cadí (Cadí i Moixeró Natural Park), ao amin'ny Catalan Pre-Pyrenees. Manana tampon-tampona roa miavaka izy, ny Pollegó Superior (misy a haavon'ny 2.506 XNUMX m) ary Pollegó Inferior (2445 m).
Voaro tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1982 izy io ary manana ny anarany avy amin'ilay fitaovana mandrafitra azy sy ny endrika soavaly an-tendrombohitra: Pedra dia vato any Castilian ary Forca dia soavaly soavaly.
Fiakarana iray andro nefa mitaky amin'ny fotoana fohy amin'ilay làlana. Manala oram-panala ny volana Novambra ka hatramin'ny Mey, koa alao antoka fa miakatra amin'ny fotoana azo antoka ianao na miaraka amin'ny akanjo sy kiraro mety.
1 Ahoana no ahatongavana any Pedraforca?
2 Ny fiakarana ho any Pedraforca
Ahoana no ahatongavana any Pedraforca?
Ny fiakarana mankany Pedraforca dia azo atao amin'ny teboka maro, azo antoka fa ny malaza indrindra dia avy amin'ny tanànan'i Gòsol sy avy amin'ny fialokalofana avo any Lluís Estaen. Holazaiko aminao ny fitsangatsanganana amin'ny fialofana ary hiampitana ny Coll del Verdet.
Mba hahatongavana amin'ny toeram-pialofana dia tsy maintsy midina ny carretera nacional C-16 izay mampifandray an'i Manresa sy i Berga amin'ny Puigcerdà, Cerdanya ary ny Catalan Pyrenees amin'ny alàlan'ny tionelina Cadí. Raha mitondra any avaratra isika dia mila miampita ny tanànan'i Berga, avy eo i Cercs sy ny toby famokarana hafanana ary alohan'ny hahatongavantsika amin'ny Guardiola de Berguedà dia hahita lalan-by amin'ny ankavia isika izay manondro an'i Saldes, Gòsol ary Pedraforca amin'ny alàlan'ny làlan'ny faritra B-400.
Hivezivezy ny sasany 15 km amin'ity lalana ity mandra-pahatonganao any Saldes, hiampita ny tanàna isika ary afaka 1Km eo ho eo dia ho hitantsika ny mihodina mankany ankavanana mankany amin'ny fialofana Lluís Estassen. 2Km bebe kokoa manaraka io lalana eo an-toerana io mandra-pahatongantsika any amin'ny toeram-piantsonana fialofana, izay hanombohana ny fitsangatsanganay.
Raha te hijanona ao amin'ny fialofana ianao dia mahatratra azy ny lalana na dia mila fiara 4 × 4 aza dia tsy dia tsara ilay aspalto. Raha tsy izany dia tsy haiko raha afaka mandeha fiara ianao raha tsy misy bebe kokoa. Izaho manokana dia nanome ahy ny fahatsapana fa tsy azo atao izany, nandao ny fiara nijanona teny ambany daholo ny olona ary nanao an'io tongotra voalohany io, nandeha tongotra 15 minitra teo ho eo.
Ny fiakarana ho any Pedraforca
Ny fiakarana mankany Pedraforca ihany no ilaina akanjo sy kiraro an-tendrombohitra mahazatra amin'ny fitsipika. Raha atao amin'ny ririnina ny fitsangatsanganana dia azo antoka fa hisy ny lanezy, ka raha misafidy ny hamita azy isika dia tokony hieritreritra ny hitondra kiraro lanezy sy fitaovana fanampiana ranomandry.
Raha vantany vao mijanona ao amin'ny faritra ijanonan'ny fijanonana ara-dalàna dia horaisinay ny lalana izay hitondra antsika mankany amin'ny fialofana Estassen, manodidina ny 15 minitra an-tongotra amin'ny alàlan'ny ala maitso misy kesika sy paoka mainty, mahazatra an'io faritra io.
Raha vantany vao ao amin'ny fialofana isika dia afaka miakatra any Pedraforca làlambe roa, amin'ny alàlan'ny scree (fantatra amin'ny anarana hoe tartera any Catalonia) na avy amin'ny Coll del Verdet. Manoro hevitra anao aho hiakatra amin'ny alàlan'ny Verdet ary hidina (raha azo atao) amin'ny alàlan'ny scree. Noho ny fahamaroan'ny mpandeha an-tongotra nahavita nidina tamin'ny alàlan'ny scree, dia malama be izao, mbola afaka midina ianao. Hanontaniako ny mpiasa mpitsoa-ponenana na ny tendrombohitra efa za-draharaha raha toa ka marina ny fiavian'izy ireo.
Rehefa nilaza izany isika dia handray ny làlan'ny Verdet ary hanomboka hianika. Amin'ny ankapobeny, ny fiakarana amin'ity zotra ity dia tokony hatao manodidina Adiny 3 avy eo Estassen eo ho eo, manodidina ny 1000 metatra ny tsy fitoviana voahangona avy amin'ny faritry ny fijanonana.
Ny tapany voalohany dia mamakivaky ala maitso ary malefaka ny tehezan-tendrombohitra, hizahantsika ilay tendrombohitra. Hitombo tsikelikely ny tehezan-tendrombohitra ary hiova tanteraka ny tontolo iainana avy amin'ny hazo lehibe ho lasa vatolampy sy hantsana. Rehefa niakatra 1 ora teo ho eo izahay, dia efa hivezivezy ny lalana manaraka ny mombamomba ilay tendrombohitra. Eo ankavanantsika dia ho hitantsika ireo tampon-tanànan'i Pedraforca sy eo ankavanantsika 1000 metatra tsy fitoviana ary ampahany amin'ny rafitra Berguedà sy Pyrenean.
Amin'ny fotoana rehetra ny làlana dia aseho tsara ary amin'ny fotoana iray dia hilaza amintsika ny mihodina miankavia mankany Verdet. Amin'io fotoana io dia efa manomboka be ny tehezan-tendrombohitra.
Rehefa afaka minitra vitsivitsy dia ho tonga any Coll del Verdet isika, teboka iray eo anelanelan'ny tendrombohitra ary hanaraka ny lalana arahintsika amin'ireo avy any Gòsol.
Manomboka eto dia manomboka ny tena fiakarana, ny minitra voalohany dia mora amin'ny alàlan'ny tany be vato misy ny faritra. Ny tapany faharoa, angamba ny tena sarotra, dia manana firongana mideza be. Ny lalana, efa manjavozavo, dia misy tady ahafahan'ny olona manao azy tsy misy olana. Eto dia tsy handeha intsony isika, handady ary saika hihanikaSarotra ny fiakarana fa amin'ny teôria dia afaka mahavita azy ny mpandeha an-tongotra rehetra.
Ny ampahany fahatelo sy farany dia mora kokoa noho ilay teo aloha nefa mbola manana fangatahana ara-batana mahatalanjona. Fianakaviana iray sy fiakarana farany mamakivaky ny tany be vato no sisa tavela ho antsika mba hahatongavantsika any Pollegó Superior, toerana avo indrindra ao Pedraforca ary ny tanjontsika farany.
Avy eto dia afaka manapa-kevitra isika raha manafoana ny lalana hiverenana amin'ny fiara isika na raha midina ilay scree eo anelanelan'ny «Pollegons» roa. Raha midina any isika dia handeha haingana kokoa fa somary mampidi-doza sy malama ihany, jereo raha midina tsy misy fahasarotana ny olona ary raha tsara ny andro.
Azo antoka ary araka ny asehon'ny lohatenin'ilay lahatsoratra, ny fitsangatsanganana sy fiakarana ho any Pedraforca dia iray amin'ireo làlana angano sy tandindon'ny jeografia Catalan, nanolo-kevitra tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Barcelona » El Pedraforca, tandindon'i Catalonia
Jatinga, toerana hamonoan-tena ny vorona